2 makore 2 ago #193 by PAYSON
Ndakaverenga uye Akanamatira "verenga-ini" nokuda Rikoooo kuti Connie. Handizivi kuti muri kukwanisawo kubhururuka nayo, uye zviri pachena, itai zvakanaka. Ndakaenda CalClassics, asi zvose 2004, 2000, uye 98 ndege. Handisi kubhururuka chinhu asi fsx zvinhu, kunze kurwa, ipapo ndiri akanyatsorevesa munhu Ubisoft mukomana. Tinotenda kuti info, kunyange. Ndafara chaizvo rubatsiro rwenyu. (The Electra ndiro OK)
Time chokusika peji: 0.294 mumasekonzi